Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny NASA dia manome ny fifanarahana Bedrest Studies amin'ny DLR
NASA dia nisafidy ny Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) an'i Cologne, Alemaina, mba hanomezana ny fampiasana ny tranony hanohanana ny fikarohana momba ny fandriana fandriana maharitra.
Ny fifanarahana momba ny Bedrest Studies $ 49.9 tapitrisa dia hanohana andiana fandalinana fandriana fandriana ao amin'ny tranoben'ny orinasa any Cologne, Alemaina. Mety ilaina koa ny serivisy any amin'ny foibe NASA hafa, toeran'ny mpiantoka na subcontractor, na trano fivarotana.
Ny fifanarahana dia manome serivisy fanohanana ho an'ny talen'ny fahasalamana sy ny fahombiazan'ny olombelona ary ny Programa fikarohana momba ny olombelona (HRP) ao amin'ny Johnson Space Center NASA any Houston. Na izany aza, tsy manantena ny NASA hiantsoana mpilatsaka an-tsitrapo mianatra any Etazonia
Ny fandalinana tohanan'ny HRP dia hampiasa fitsaharana mitongilana amin'ny loha midina ho toy ny analogue amin'ny fampifanarahana ara-batana sasany niainan'ny mpanamory sambon-danitra nandritra ny sidina an-habakabaka. Ny fikarohana dia mikendry ny hahatakatra bebe kokoa sy hanombantombana ny fanoherana ny loza mifandraika amin'ny iraka sidina an-habakabaka maharitra, anisan'izany ny programa International Space Station, Artemis ary Gateway.
"Ny lohahevitry ny fikarohana lehibe amin'ity taona ity dia ny fomba fiasan'ny ekipa rehefa miasa tsy miankina amin'ny Mission Control sy ny fanohanana hafa mifototra amin'ny tany ary ny fahombiazan'ny rafitra mandroso samihafa hanohanana ireo karazana asa tsy miankina ireo," hoy i Brandon Vessey, mpahay siansa momba ny fikarohana. asa sy fampidirana ao anatin'ny HRP. "Ny valiny avy amin'ireo fanadihadiana ireo dia hanampy amin'ny fampahafantarana ny fomba planin'ny NASA amin'ny iraka fikarohana amin'ny ho avy rehefa mila miasa tsy miankina amin'ny Tany ny mpiasan'ny mpanamory sambon-danitra noho ny ataon'izy ireo amin'ny iraka iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao any amin'ny orbite ambany."
Ny fifanekena fanaterana tsy voafaritra/faritra tsy voafaritra miaraka amin'ny baiko asa raikitra amin'ny vidiny raikitra, dia manomboka ny 23 Nôv. 2021, ary mitohy hatramin'ny 31 Desambra 2025, tsy misy fe-potoana.